Abavelisi be-ceramic eyenziwe nge-ceramic abavela eTshayina | Ittl
I-ceram ye-ceram ithe cengle ineentlobo ngeentlobo zezitayile, ikakhulu i-ARC ibethekekile, i-cone ithe tye, i-cylindrical imbumbulu.
Ubungakanani be-assay of they: 5g / i-5G / i-30G / i-40g / i-45g / i-50g / i-50g / i-55g / 75g
Singabonelela ngeemveliso ngokwemizobo yomthengi, iisampulu kunye nemfuno yexabiso elipheleleyo.
I-Refrectory Food Ceram Ceram iMbulali
Isiseko se-1650 sikhulu
I-Recictoriness phantsi komthwalo 1420 I-CANERGRAD
Sio2 45% -56%
Iimpawu: Ukunganyangeki okuqinileyo kunye nokunganyangeki okuqinileyo, ukungakwazi kwaye kungabi nakreyithi, ngaphandle kwegolide nesilivere, iziphumo zovavanyo oluchanekileyo.
I-avareji ye-avaal inokusetyenziselwa amaxesha ama-2-3, i-serial yendawo yokuthumela ngaphandle inokusetyenziselwa amaxesha ama-3-5
I-CHETED isetyenziselwa ilebhu
IQELA: Sineqela lethu ukuba sifunde, uyilo, ukuvelisa kunye nokuthengisa.
Imbali: Sidibene ne-r&D, ukuvelisa kunye nokuthengisa ngokupheleleyo,
Izixhobo Sinemveliso epheleleyo yemveliso kunye nezixhobo zokuvavanya, kubandakanya umgca ozenzekelayo.
Ukuqinisekiswa kunye nelungelo elilodwa lomenzi
Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga ne-clay ibe nye
I-Recractory imbi entle